एसईई नतिजाः अनिवार्य विषयमा कमजोर – Everest Dainik – News from Nepal
एसईई नतिजाः अनिवार्य विषयमा कमजोर
भक्तपुर, असार १३ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले सञ्चालन गरेको २०७५ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नियमित र प्राविधिकतर्फको नतिजा बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ ।
परीक्षा सकिएको ८४औं दिनमा परीक्षाफल सार्वजनिक गरिएको छ । परीक्षामा चार लाख ५९ हजार २७५ परीक्षार्थी सम्मिलित थिए । सार्वजनिक नतिजाअनुसार १७ हजार ५८० परीक्षार्थीले समग्र स्तरीकृत अङ्क (जीपीए) ३.६० देखि ४.० ल्याएका छन् । यो सबैभन्दा उच्च जीपीए हो । ग्रेड वृद्धि परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुन केही समय लाग्ने पनिकाले जनाएको छ ।
गतवर्षको एसईई परीक्षाको नतिजा उत्साहजनक नदेखिनुमा शिक्षक मुख्य जिम्मेवार रहेको ठान्नुहुन्छ शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला । ‘शिक्षकको अनुहार हेरौँ । ऊ जिम्मेवार छ कि छैन हेरौँ । उही शिक्षकलाई निजी स्कुलले घोटाउँछ, तर सामुदायिक स्कुलमा घोटाइँदैन” उनले भने, “सुरुमै ल्याकत नभएका शिक्षकलाई भर्ती गरेका छौँ । शिक्षकमा ल्याकतकै समस्या भएपछि नतिजामा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।’
अर्का शिक्षाविद् डा. आनन्द पौडेलले शिक्षक र विद्यार्थी दुवै परीक्षामुखी हुँदा समस्या देखिएको बताए। उनले भने, ‘सिकाइ र पठनपाठनमा सुधार गर्न सकेनौँ । शिक्षकलाई परीक्षाका लागि मात्र तयार गर्न थाल्यौँ, यो पद्धतिको दोष हो । परीक्षालाई मात्र केन्द्रित गर्ने गरी कोचिङलाई प्राथमिकता दियौँ ।’
शिक्षाविद् डा. सदानन्द कँडेलले विगत १० वर्षदेखिका प्रश्नपत्रका आधारमा विद्यार्थीलाई तयार गर्ने प्रवृत्ति रहेको र त्यसले क्षमताभन्दा धोका दिएको उल्लेख गर्दै थपे, “शिक्षक र विद्यार्थीबीच अन्तक्र्रिया नै हुनसकेको छैन । ”
गत २०७४ सालमा पनि माथिल्लो जीपीए अर्थात् ३.६ देखि ४।० प्राप्त गर्ने सामुदायिकका दुई हजार ८१५ र निजीका १५ हजार ८६९ परीक्षार्थी थिए । त्यस वर्ष पनि सामुदायिकका परीक्षार्थीको ओइरो जीपीए २.० देखि २।४ मा थियो । त्यस ग्रेड समूहमा सामुदायिकका ९८ हजार ८६९ र निजीका सात हजार ९४६ परीक्षार्थी थिए ।
२०७५ सालको एसईई परीक्षाको नतिजाले अब्बल नतिजा प्रदेश ३ को रहेको देखाएको छ । सो प्रदेशमा नियमिततर्फ जीपीए ३।६ देखि ४।० ल्याउने परीक्षार्थी १० हजार ६८ छन् ।
२०७५ सालको एसईई परीक्षामा सहभागी भएका मध्ये एक लाख १५ हजारले ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिने अवसर पाउने भएका छन् । दुई विषयसम्म सी वा सीभन्दा कम ग्रेड प्राप्त गरेकाहरूले ग्रेड वृद्धिको अवसर पाउने व्यवस्था छ । जीपीए १।६ भन्दा कम ल्याउने परीक्षार्थीले कक्षा ११ मा भर्ना नपाउने व्यवस्था भएकाले उनीहरूले माथिल्लो तहमा भर्ना हुन ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सम्मिलित हुनैपर्ने हुन्छ ।
गत वर्षको एसईई परीक्षामा प्रतिनिधि सभा सदस्य शान्ता चौधरीले जीपीए २।६५ र नायिका करिश्मा मानन्धरले ३ जीपीए प्राप्त गरेका छन् ।
रामेछापमा बिहानै जिप दुर्घटना हुँदा ३० जना घाइते